चार बर्षदेखि राहत कै आशा – News Portal
चार बर्षदेखि राहत कै आशा
July 5, 2018 epradeshLeaveaComment on चार बर्षदेखि राहत कै आशा
तुलसीपुर, २० असार ।
बाढीले छाकबास लुट्यो । राहत पाउने आशमा चार बर्ष बिते पाचौँ बर्षका बर्खा सुरु भइसकेको छ । न सरकारले भनेको पूरा राहत दिएको छ , न त भने जस्तो आफैले घर बनाउन सकिएको छ, दंगीशरण– १ गोल्टाकुरीका ओकिलाल भण्डारीले भने, हामी पीडितका लागि कोहि रहेन छ । फेरी बर्षायाम सुरु भयो । बाढी आउलाकी भनेर अहिले पनि सुत्न सक्दिन् उनले भने ।
तुलसीपुर–१३ का विनोद पाण्डेको पनि समस्या त्यस्तै छ । उनी पनि २०७१ का बाढीपीडित हुन् । राज्यबाट पाउनुपर्ने उचित राहत अहिलेसम्म नपाएको बताए । पाण्डेले सरकारले दिने भनेको चार किस्तामध्ये अहिलेसम्म दुई किस्ता मात्रै पाएको बताए । सरकारले भूकम्पसरह राहत दिने भनेको भएपनि अहिलेसम्म नदिएको दाङका बाढीपीडितहरुले गुनासो गरेका छन् ।
दाङमा बाढीले क्षति पु¥याएको पूरा चार बर्ष बितिसक्यो तर दाङका बाढीपीडितले अझै सरकारले दिने भनेको राहत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । बाढीले विस्थापित भएका कतिपय पीडितहरु अहिले पनि पाल र त्रिपालको सहारामा छन् । २०७४ सालको बाढीको त कुरै छोडौँ २०७१ साउनमा आएको बाढीबाट घरवास गुमाएका जिल्लाका बाढीपीडितले सरकारले दिने भनेको राहत स्वरुपको रकम ०७५ को बाढी आउन सुरु हुँदासमेत पूरा पाउन सकेका छैनन् । कतिपय बाढी पीडितहरुले जसोतसो बनाएको झुप्रोमा कठ्यांग्रिदो जाडो छलेर त्यस यताका बर्षहरु बिताए पनि अधिकांशले अझैसम्म आफ्नो घर बनाउन सकिरहेका छैनन् ।
०७१ सालको बाढीले क्षति पु¥याएर गयो फेरी २०७४ को बाढीले थप क्षति पु¥यायो । सरकारले घर बनाउन राहत दिने कुरा थियो अहिलेसम्म पूरा राहत दिएको छैन सरकारले हामीहरुलाई ढाटिरहेको छ । साविक गोल्टाकुरी–२ का बाढीपीडित धर्मराज खड्काले बताए । २०७१ हामी बाढीपीडितहरुलाई घर बनाउन १ किस्ताको ५० हजारको दरले ४ किस्तासम्म रकम दिने कुरा थियो तर सरकारले २ किस्ता मात्र दिएर आफूहरुलाई छलेको खड्काको गुनासो रहेको छ । बाढीपीडित विनोद पाण्डेले राज्यले तत्काल उपलब्ध गराउने भनेको राहत २०७५ सालको बाढी आउने समय सुरु हुँदासमेत राज्यले उपलब्ध गराउन नसक्नु लाजमर्दो भएको भन्दै उनी भन्छन् ‘सिंहदरबार गाउँघरमा आइसक्यो, हिजो गाउँविकास समितिहरु थिए आज गाउँपालिका, उपमहानगरपालिका भैसके तर पनि राज्यले बाढीपीडितहरुलाई भनेको राहत रकम अझसम्म उपलब्ध गराउन सकेको छैन । कि दिन सक्दैनौँ भन्नुपथ्र्यौ कि समयमै उपलब्ध गराउनसक्नु पथ्र्यो जनताले कसरी विश्वास गर्ने जनतालाई दुःख परेको बेला सरकार छ भनेर । त्यस्तै २०७१ को बाढीबाट आफ्नो घरवास गुमाएका साविक उरहरी गाविस हाल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्वर ११ का यज्ञबहादुर केसीको पनि पाण्डे र वली जस्तै राज्यप्रति गुनासो रहेको छ । घर बनाउन भनेर सरकारले ५० हजारको दरले ४ किस्ता रकम उपलब्ध गराउँछौँ भनेको थियो अहिलेसम्म २०७१ का हाही बाढीपीडितले त मात्र २ किस्ता रकम पाएका छौँ उनले भने ‘२०७४ का बाढीपीडितहरुको अवस्था के होला ? त्यसैले राज्यका कुराप्रति अब त विश्वाससमेत लाग्न छोडिसक्यो । सरकारले राहत देला र हामीले घर बनाउला भन्नेमा ।
सरकारले दिने भनेको राहत रकम
त रेडियो तथा टिभीमा बज्ने र पत्रपत्रिकामा
छापिने समाचार मात्र हुन् ।
खड्का, पाण्डे र केसी त बाढीपीडितहरुमध्ये केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । यस्ता सयौँ बाढीपीडित छन् । जो राज्यले तत्कालीन समयमा उपलब्ध गराउने भनेको राहत रकम हालसम्म पाउन नसकेका । उनीहरु भन्छन् ‘सरकारले दिने भनेको राहत रकम त रेडियो तथा टिभीमा बज्ने र पत्रपत्रिकामा छापिने समाचार मात्र हुन ।
भवन डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले ०७१ को बाढीबाट पीडित भएका घर तथा जग्गा भएका १ सय ४९ घरपरिवारलाई ५० हजारका दरले ७४ लाख ५० हजार राहत रकम गरेर दुई किस्ता वितरण गरेको र जग्गा भएका घर नभएका २ सय ५० घरपरिवारलाई २५ हजारका दरले ६२ लाख ५० हजार नगद बितरण गरेको बताए । उनले कार्यालयले सरकारले उपलब्ध गराएको दुई किस्ता रकम मात्र बुझाइएको बताए । तर पनि सरकारले घोषणा गरेजस्तो उनिहरुलाई पूरा ४ किस्ता रकम सरकारले आफूहरुलाई नपठाउँदा बाढी पीडितहरुलाई बुझाउन नसकिएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै २०७४का बाढीपीडितहरुलाई राज्यले आवस निर्माण बाफतको कुनै पनि रकम उपलब्ध नगराएको हुँदा २०७४ का दाङ जिल्लाका कुनै पनि बाढीपीडितहरुलाई राहत रकम उपल्ब्ध नगराएको बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका लेखापाल विश्वमा बहकरीका अनुसार २०७४ का बाढी प्रभावितहरुमध्ये दाङमा कुल ३५९ पूर्ण क्षति भएको र २८२ आंशिक क्षति भएकाहरुमध्ये तत्कालीन अवस्थामा राहत स्वरुप खाद्यान्न सहयोगको लागि प्रतिव्यक्ति ७० रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग गरेको र पूर्ण क्षति भएकाहरुलाई घरपरिवारलाई १० हजारका दरले रकम वितरण गर्नुका साथै त्यसपछि पूर्ण क्षति भएका ३५९ घरपरिवारलाई न्यानो कपडाको लागि रु १० हजार र घर मर्मतको लागि १५ हजारका दरले २५ हजार रकम वितरण गरिएको बताए । केही घरलाई अझै राहत रकम दिन नसकिएको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले जिल्लामा बाढीपीडितहरुलाई तत्काल खाद्यान्न तथा घर मर्मतको लागि राज्यले उपलब्ध गराउने राहत रकम जिल्ला प्रशासनमा आउने र त्यसलाई वितरण गर्ने र त्यसको व्यवस्था मिलाउने काम आफूहरुको भएपनि आवास निर्माणको राहत रकम भवन डिभिजनमार्फत हुने बताए ।
वैकल्पीक हवाई मैदान आवश्यक छैन्
वैकल्पिक विमानस्थल की …?
जेसीज हाफ म्याराथुन हुने